अन्नपूर्ण वडा नं. ११ को वडाध्यक्षमा युवा नेता ललित गुरूङ चुनावी मैदानमा, घरदैलो कार्यक्रम तीव्र — donnews.com
अन्नपूर्ण वडा नं. ११ को वडाध्यक्षमा युवा नेता ललित गुरूङ चुनावी मैदानमा, घरदैलो कार्यक्रम तीव्र
घान्द्रुकको सडक, पुल, खानेपानी आयोजना समेतका पूर्वाधार निर्माणमा पनि गुरुङको महत्वपूर्ण योगदान छ । पर्यटन व्यवसायी समेत रहेका गुरुङको स्थानीय किम्रोङखोलामा घान्द्रुक एग्रो फर्म सञ्चालनमा छ । गुरूङ कै नेतृत्वमा २०७४ सालमा अन्नपूर्ण आधारशिविर (४१३० मिटर) मा प्रथम अन्नपूर्ण पर्यटन महोत्सवको आरम्भ गरिएको हो ।
पोंखरा, ७ वैशाख । नेपाली कांग्रेस कास्कीका युवा नेता ललित गुरूङ अन्नपूर्ण गाउँपालिका-११ को वडाध्यक्ष उम्मेदवार बनेका छन् । नेता गुरुङलाई वडा ईकाई कार्य समितिले वडाध्यक्षमा सर्वसम्मत सिफारिस गरेको हो। साविक घान्द्रुक गाविस हालको अन्नपुर्ण १० र ११ मा विकासप्रेमी युवाको छबि बनाएका गुरूङ प्रशासनिक र राजनीतिक क्षेत्रको जनसम्पर्कमा समेत राम्रो पकड भएका युवा नेता हुन् ।